Fasaxyada Maraakiibta - Waa maxay meesha ugu caansan? | Socdaalka Absolut
Haddii aad rabto inaad dhinac iska dhigto diyaaradda iyo sidoo kale baabuurka ama tareenka, waxba ma aha inaad sharad ku gasho mid ka mid ah siyaabaha gaarka ah ee safarka. Fasaxyada safarka markasta waa mid ka mid ah fikradahaas oo ay tahay inaad fuliso ugu yaraan hal mar noloshaada. Waxay noqon kartaa safar jaceyl ah haddii aad doorbido ama qoyskaaga, iyadoo ku xiran baahida mid kasta, laakiin labada xaaladoodba filashooyinka riyooyinkeenna waa la fulin doonaa. Miyaadan jeclayn inaad iyaga rumayso?
Taasi waa sababta ka dib dhammaan waqtigan masiibada ah, waa inaan u dabaaldegnaa soo laabashada safarka qaab ahaan. Si taxaddar leh haa, laakiin u fulinta riyooyinkaas aan soo sheegnay oo muddo dheer qarsoonaa. Dhammaan waan idiin sheegeynaa faa'iidooyinka safarka noocaas ah iyo meelaha la jecel yahay in la booqdo.
1 Greece: Mid ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee loo safro
2 Waa maxay sababta aad u dalxiis tagto?
3 Fasaxyada safarka, goorta la ballansanaayo?
4 Maxaan u baahanahay inaan sameeyo safarka badda Mediterranean
Greece: Mid ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee loo safro
In kasta oo ay run tahay inaan ka hadli karno dhowr meelood oo ah qaab fasaxyo dalxiis, Jasiiradaha Giriiggu waa mid ka mid ah kuwa ugu cadcad. Macno malahan haddii aad hore u soo martay aaggaas, maxaa yeelay iyada oo ay ugu wacan tahay tan macneheedu yahay socdaalka, waxaad ku ogaan doontaa si aad u sii gaar ah. Badda Mediterranean -ka had iyo jeer waa jawharad la ogaado oo sidaas oo kale, Giriiggu waa dhagaxa ugu dhalaalaya.. ka Giriigga safarka Waa midda ugu badan ee la doortay maxaa yeelay aaggani wuxuu leeyahay hanti qadiimi ah oo u gaar ah, sidaas darteed wuxuu nooga tegayaa muuqaallo lagu sawiri doono ishayada.
Laakiin iyada oo kaliya maahee joogsiga Athens iyo Acropolis waxay noqon doontaa mid kale oo ka mid ah qodobbada muhiimka ah, iyada oo aan la illoobin Crete, maadaama ay leedahay laba dekedood oo loogu talagalay maraakiibta dalxiiska. Halkaas waxaad ku booqan kartaa Qasriga Knossos, kaas oo waliba kaa yaabin doona hadhaaga iyo qodob muhiim u ah ilbaxnimada Hellenic. Xaqiiqdii waad maqashay Mykonos xeebteeda. Sidaa darteed, waa deegaan kale oo la xushay marka la joojinayo safarkaaga. Si ay ugu dhammaato Santorini oo leh qorrax -baxyadeeda caanka ah. Hadda waxaad wax yar ka fahmi doontaa sababta Giriigga iyo Badda Mediterranean -ka ay uga mid yihiin meelaha ugu waaweyn ee loo safro!
Waa maxay sababta aad u dalxiis tagto?
In kasta oo ay u ekaan karto su’aal aannu garanno sida looga jawaabo, haddana waxaan ku siin doonaa dhawr sababood oo aad ku samaysato boos celintaada. Waxaan cadayn in markab markab Waxay na gayn doontaa meelo aan had iyo jeer sahlanayn in lagu maro gaadiid kale. Taasi waa sababta aad u tahay wax aadan si joogto ah u samayn, aad si aad ah ugu noolaan karto. Laga bilaabo intaas waa waayo -aragnimo dhammaystiran oo hal -abuur leh, waxaad yeelan doontaa ikhtiyaarka ah inaad fuliso hawlo kala duwan laakiin adigoon isku meel ka bixin. Sababtoo ah doonta waxaad ka heli doontaa waxqabadyo maalmeed, ciyaaro, madadaalo, waqti barkadda nasashada iyo waxyaabo kaloo badan. Wax walba waxaa loogu talagalay inaad ku raaxaysato joogitaankaaga!
Fasaxyada safarka, goorta la ballansanaayo?
Waxa ugu fiican ayaa ah, sida safar kasta oo qiimahiisa milixdu ku fadhido, waxaa ugu wanaagsan in la sameeyo boos celinta sida ugu dhakhsaha badan. Horusocodku waa wax walba si aad u awooddo in aad qorshe fiican samaysato. Haddii aad rabto inaad wax yar kaydsato, wax ka fiican ma aha inaad ku samayso xilli sare oo sugto ilaa Sebtembar si aad u hesho. Tan iyo marka lagu daro, heerkulka dhibcaha qaarkood ee aad booqan doonto waxay ku jiri doonaan xadka la awoodi karo si aad ugu raaxaysato safar kasta si buuxda. In kasta oo ay run tahay sannadka oo dhan waxaad samayn kartaa boos celintaada iyadoo lagu saleynayo baahiyahaaga. Maadaama haddii aad qoys ahaan u safraysid, waxaad u baahan doontaa meel bannaan oo waxaa habboon inaad hore u sii socoto ka hor intaadan kuraasta kaa dhammaan. Xusuusnow inay had iyo jeer jiri doonaan dalabyo aad ka faa'iideysan karto si aad u keydiso qanjaruufo wanaagsan.
Maxaan u baahanahay inaan sameeyo safarka badda Mediterranean
Markaad doorato oo aad ballansato safarkaaga oo ay la socoto maalmaha aad ku qaadan doonto fasaxaaga dalxiiska, shaki ayaa soo baxa, maxaa yeelay waligaa kuma safrin habkan gaadiidka. Laakiin ha welwelin maxaa yeelay waxba kama duwana kuwa kale ee aad taqaan. Waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaad nasato oo aad naftaada ku raaxaysato si buuxda maxaa yeelay doontu waxay leedahay wax kasta oo aad ugu baahan tahay. In kasta oo ay run tahay in kan weyn waxa aad samayn karto waa inaad qaadato dhar labadaba si aad u noqoto mid raaxo leh maalintii iyo waxoogaa rasmi ah habeenkii. Tan waxaa loogu talagalay in lagu raaco.
Laakiin markaan sameyno joogsiyada aan rabno inaan ku raaxeysano, waxaa lagugula talinayaa inaad soo saarto qaabkaaga ugu raaxada iyo raaxada badan. Sidaa darteed, waa inaan had iyo jeer xirnaa kabo ku habboon iyo in dharku sidoo kale habboon yahay. Dalxiiska noocan ah, xusuusnow inaad mar walba sidato boorsada yar oo leh waxyaabaha aasaasiga ah, oo lagu daray dhalo biyo ah iyo ilaalinta qorraxda. Maskaxda ku hay in meelaha qaarkood oo aad booqan doonto, aysan u oggolayn in lagu soo galo dhar aad u gaaban waana wax lagu xisaabtamo. Waxaa hubaal ah hadda in aad u kala caddaan doontid meeshaad u socoto, gaadiidkaaga iyo fasaxyadaada weyn ee ku sugaya!
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Fasaxa Maraakiibta: Rumayntaada oo dhan Rumayso!